Maritime Blue, Port of Seattle waxay bilawday mawjad labaad oo ah dardar-haye hal-abuurnimada badda - Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Badaha Buluugga ah, Dekedda Seattle waxay bilawday mawjad labaad oo ah xawaareeye hal-abuurka badda
Badaha Buluugga ah, Dekedda Seattle waxay bilawday mawjad labaad oo ah xawaareeye hal-abuurka badda
Codsiyada hadda waxay furan yihiin illaa Nofeembar 20 ee ganacsiyada badaha ee raadinaya inay wax soo saaraan oo ay koraan
SEATTLE-Baddu waa mid ka mid ah warshadaha waaweyn ee ugu da'da weyn Washington, waxayna sidoo kale noqoneysaa mid ka mid ah kuwa ugu hal-abuurka badan. Washington Maritime Blue iyo Port of Seattle waxay mar kale iskaashi sameeyeen si ay u bilaabaan kooxda xigta ee Mardeime Blue Innovation Accelerator, oo ah barnaamij deg deg ah oo afar bilood soconaya kaas oo bixinaya marinka shabakad caalami ah oo lataliyayaal iyo lataliyayaal ah oo ay weheliyaan warshadaha badda Washington iyo hogaamiyaasha dhaqaalaha badda. Xawaareyuhu wuxuu ka caawiyaa ganacsiyada badda inay horumariyaan, koraan oo ay hubiyaan maalgelinta qaybta ay raasamaalku badanaa ku yar tahay.
Video: Xawaare Buluug Badeedka 2021
Waxaa aasaasay 2019 oo ay maalgelisay Dekedda Seattle iyo deeq ka timid Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington, xawaareyuhu wuxuu horumarinayaa qaybaha muhiimka ah ee gobolka Istaraatiijiyad loogu talagalay Dhaqaalaha Buluugga ah, kaas oo lagu muujinayo koorso faahfaahsan oo lagu noqonayo wershad badeed horumar leh, heer caalami ah, waarta.
“Dekedda Seattle waxay ku faraxsan tahay inay mar kale kafaalo qaado dadaallada socda ee Gobolka Washington ee ku aaddan dhiirrigelinta hal-abuurnimada waaxda badda,” ayuu yiri Fred Felleman, Madaxweyne Ku-xigeenka Guddiga Seattle. "Waxaa na dhiirrigeliyey kooxdeennii ugu dambeysay ee hal-abuurayaasha ah waxaana rajeyneynaa inaan aragno sida wareeggan xiga ee ganacsatada ay uga caawin doonaan gobolkayagu inuu u gudbo dhaqaale buluug ah oo loo wada dhan yahay oo waara."
Codsiyada kooxda cusub waxay furan yihiin illaa Nofeembar 20. Codsadayaasha xiisaha leh, la taliyayaasha mustaqbalka iyo maalgeliyeyaashu waxay daawan karaan bandhigga 2020 ee kooxda ugu horreysa ee ganacsiyada 11, wax badan ka baro xawaaraha, kana dalbo fursadda 2021 www.maritimeblue.org/blue-accelerator.
Bishii Abriil ee sannadkan, 11 bilow ayaa ka qalinjebiyey ka dib bandhig guuleystey oo horseeday guulo badan oo ka mid ah kooxdii ugu horreysay, oo ay ku jiraan maalgelin sinnaan ah oo taxane ah A, maalgelinta heerka abuurka, mashaariicda bandhigyada, qandaraasyada macaamiisha, shahaadooyinka sharciyeynta, iyo kororka dakhliga.
Tusaale ahaan, Discovery Health MD oo fadhigeedu yahay Seattle waxay soo saartay taam ahaanshihii ugu horreeyay ee qiimeynta waajibaadka saaran ee badmaaxiinta hadda ku lug leh baaritaanka COVID-19 iyo karantiil. Dr. Ann Jarris, oo ah isku xiraha iyo agaasimaha guud ee shirkada sii kordheysa, ayaa tiri "waxaan hayey macaamiisha xamuulka iyo batroolka oo naga soo wacaya dekedaha Shiinaha iyagoo na weydiinaya caawimaad. Way adkayd markii aan dadka ka dejin kari waynay maraakiibtooda dekedda si ay u helaan daryeel caafimaad oo shisheeye.
“Ma aanan ogeyn meel aan xoogga u saaro xoojinta ama dhisidda shabakad ku saabsan warshadaha badda. Ma aanan ku xirnayn dowladda, siyaasadda, ama nidaamka xakamaynta, ”ayuu yiri Jarris. Baahida loo qabo samaynta xidhiidhada cusub iyo go'aaminta istiraatiijiyadda koritaanka ayaa ku kaliftay iyada inay codsato barnaamijka Badaha Buluugga Badaha
Xawaareyuhu wuxuu awood siiyay wada shaqeyn qoto dheer oo udhaxeysa shirkadda, warshadaha kalluumeysiga, Dekedda Seattle, iyo Jaamacadda Washington taasoo horseeday qorshe loogu talagalay baaritaanka safka hore ee COVID-19 iyo istiraatiijiyad dhimista halista ah ee Xeebaha Kalluumeysiga Waqooyiga Baasifigga, oo gacan ka geysanaya nidaamka karantiilinta iyo qorsheynta shaqaale badbaado leh.
Waan jeclahay inaan si dhow ula shaqeyno shirkadaha kale xawaaraha… dhamaanteen waan ka shaqeynay inaan fahano baahiyaheena kaladuwan; sida aan ula macaamilnay warshadaha, ”ayuu yiri Jarris.
Ugu dambeyntiina, shirkaddu waxay kor u qaadday oo ay ku samaysay tijaabooyin COVID-19 in ka badan 5,000 oo kalluumeysato ka hor xilligan kalluumeysiga ganacsi ee hadda socda. Tani hadda waa tusaalaha adduunka intiisa kale.
"Qaabkan awgood, Maraakiibta Kalluumeysiga Waqooyiga Baasifigga ayaa si guul leh u kalluumeysanaya hadda," Dr. Jarris ayaa sidaas yidhi.
“Warshadaha badaha ee Washington waxay xoojinayaan bulshada kaliya maahan dekadaha mashquulka badan ee Puget Sound, laakiin dhamaan gobolka oo dhan. Washington Maraakiibta Buluugga ah iyo Dardargelinta Hal-abuurka Badda ee Seattle waxay hubinayaan inaan ku sii jirno hoggaamiyeyaasha caalamiga ah ee dhaqaalaha waara iyo inaan sii wadno abuurista shaqooyin wanaagsan mustaqbalka, ”ayay tiri Agaasimaha Ganacsiga Lisa Brown..
Mawjadaha labaad ee ganacsiyada ee soo galaya xawaaraha ayaa tilmaamaya kobaca iyo fursadaha maalgashi ee Dhaqaalaha Caalamiga ah ee Buluugga ah. Mid ka mid ah warshadaha ugu da'da weyn gobolka, waaxda badaha ee $ 21.4-bilyan ayaa dib u soo ceshanaysay si ay si fiican uga faa'iideysato farsamada, waxsoosaarka horumarsan, iyo ilaha hal-abuurnimada ee Washington ay bixinayso. Barnaamijyada Washington Maritime Blue, sida xawaaraha hal-abuurnimada, waxay fursad xoog leh u siineysaa shirkadaha maxalliga ah inay koraan, shaqaaleeyaan shaqooyin cusub iyo karti, iyo inay maalgeliyaan qayb ay raasamaalku inta badan ku yar yihiin.
"Waxaan hoos udhignay taageerada iyo guusha kooxdayada caleemo saarka waxaana ku faraxsanahay inaan dib ugu laabanno nidaamka deegaanka ee hal-abuurnimada si aan u qabanno mowjadaha soo socda ee aasaasayaasha iyo ganacsatada. Waxaan raadineynaa kuwa diyaar u ah inay koraan, wax soo saaraan, oo siiyaan xalal muhiim u ah caqabadaha baddeena, marin biyoodkayada iyo bulshada aan la kulanno maalin kasta. Sannadkii hore xilligan oo kale waxaan u maleynay inay tani tahay fikrad wanaagsan, haddana waa ka sii muhimsan tahay inaan ka shaqeyno helitaanka raasumaal qulqulaya, xallinta saameynta cimilada, iyo u istaagno isbarasho sinnaan iyo adkeysi leh, ”ayuu yiri Joshua Berger, Badmareenka Gov Inslee. Hogaanka Qeybta, Aasaasaha iyo Gudoomiyaha Guddiga Washington Maritime Blue.
Joshua Berger, Washington Maraakiibta Buluuga ah
Peter McGraw, Dekedda Seattle
Penny Thomas, Wasaaradda Ganacsiga ee Gobolka Washington
Ku saabsan Xawaaraha Abuurista Badaha Buluugga ah:
Maritime Blue waxay hadda aqbashay codsiyada bilow kasta ama hawl kasta oo cusub oo xamaasad badan u leh helitaanka xalal cusub oo ka faa’iideysanaya Dhaqaalaha Buluugga ah - kobaca waaxda badaha iyo badda; wax ka qabashada dhibaatooyinka cimilada iyo taageerida jawi caafimaad leh oo ku saabsan badweynta iyo badda; iyo kobcinta bulshooyinka adkaysiga iyo sinnaanta leh. Araajida ayaa la dhalin doonaa iyada oo ku saleysan labadaba koritaankooda iyo sidoo kale saameynta ay ku yeelan karaan la kulanka himilooyinka Istaraatiijiyadda Gobolka Washington ee Dhaqaalaha Buluugga ah.
Codsadeyaasha waxaa dib u eegi doona oo soo xuli doona koox ka mid ah la-taliyayaasha hal-abuurka ee badaha buluugga ah. Wixii macluumaad dheeraad ah, halkan ka eeg www.maritimeblue.org/blue-accelerator.
Ku saabsan Badda Badda
Washington Badda Blue waa isbahaysi aan faa'iido doon ahayn, istiraatiijiyad istiraatiiji ah oo loo sameeyay si loo dardar-geliyo hal-abuurnimada iyo joogtaynta taageerada dhaqaalaha buluugga ah ee loo dhan yahay. Ujeedada aan ka leenahay hirgelinta Istaraatiijiyadda Gobolka Washington ee Dhaqaalaha Buluugga ah oo ay keeneen Guddoomiyaha La-talinta Innovation-ka Badda ee Badhasaabka Jay Inslee, waxaan iskaashi la leenahay warshadaha, waaxda dawladda, hay'adaha cilmi-baarista & tababarka, iyo ururada bulshada. Maritime Blue waxay u shaqeysaa sidii loo abuuri lahaa heer caalami ah, kobcaya, loo siman yahay oo la joogteyn karo warshadaha badda iyo badaha iyada oo loo marayo wadaagista aqoonta, hal-abuurnimada wadajirka ah, ganacsiga, ganacsiga, ganacsiga iyo horumarinta shaqaalaha.
Ku saabsan Dekedda Seattle:
Waxaa la asaasay sanadkii 1911, Dekeddu waxay leedahay oo ay maamushaa Gegada Diyaaradaha Caalamiga ah ee Seattle-Tacoma, Terminal-ka Kaluumeysatada — oo ah guriga Maraakiibta Kalluumeysiga Waqooyiga Baasifigga — iyo marinnada dadweynaha. Dekedda sidoo kale waxay leedahay laba boosteejo oo maraakiibta dalxiiska ah, Terminal hadhuudh ah, hanti maguurtada ah, iyo boosteejooyin xamuul badeed iyada oo loo marayo iskaashiga Northwest Seaport Alliance. Hawlgallada dekeddu waxay gacan ka geystaan ​​taageerada ku dhowaad 200,000 oo shaqo iyo $ 7 bilyan oo mushahar ah gobolka oo dhan. 18-ka sano ee soo socota, "Agenda Century" ee dekeddu waxay dooneysaa inay abuurto 100,000 oo shaqo oo dheeri ah iyada oo loo marayo koboca dhaqaalaha iyadoo noqonaysa dekedda hoggaamineysa cagaarka iyo tamarta dalka. Wax dheeri ah ka baro www.portseattle.org.
Ku saabsan Ganacsiga
Ganacsigu wuxuu la shaqeeyaa dawladaha hoose, ganacsiyada, ururada ku salaysan bulshada iyo qabaa’ilka si loo xoojiyo bulshada. Qaybaha kaladuwan ee waaxdu ka kooban tahay in ka badan 100 barnaamijyo iyo iskaashi wax ku ool ah oo dowladeed iyo mid gaar loo leeyahayba waxay dhiirrigelisaa bulsho joogto ah iyo horumar dhaqaale si looga caawiyo dhammaan reer Washington inay barwaaqoobaan. Wixii macluumaad dheeraad ah, booqo http://www.commerce.wa.gov. Wixii macluumaad ah ee ku saabsan helitaanka ama ballaarinta meherad ku taal Washington, booqo doorowashingtonstate.com.
← Fursad deeqo oo cusub oo loogu talagalay adeegyada dhibbanayaasha ee beelaha Madow Deeqda cusub ee federaalku shaacisay waxay taageertaa mashaariicda Badbaadada Bilowga ah iyo iskaashiyo loogu talagalay in lagu caawiyo ganacsiyada gobolka Washington inay dib u bilaabaan, dib u dhistaan ​​oo ay noqdaan kuwo adkeysi badan →